तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक लक्षित गर्न धेरै धेरै विधिहरू यातायात सम्बद्ध गर्न
by on जुन 14, 2021
यदि तपाइँ एक अन-लाइन सेवा चलाउनुहुन्छ, यो केवल तपाइँले विश्वास गर्न विश्वास गर्नु पर्छ वेब ट्राफिकलाई लक्षित गर्न। स्थितिहरू दिनको प्रत्येक मिनेट परिवर्तन गर्दछ साथ साथै त्यो निर्भर गर्दछ वेबसाइट ट्राफिक तपाईंको इन्टरनेट साइट को लागी संचालित।
तल खेलिरहेको राशनेल भनेको यो हो कि तपाईं आफ्नो वेब साइट अवलोकन गर्न व्यक्तिहरूमा पुग्नुहुन्छ। ती टिप्पणीहरू उनीहरूले निश्चित रूपमा निश्चित रूपमा प्रदान गर्दछ तपाईको लागि अझ बढि साइट आगन्तुकहरू लिनको लागि। तपाइँको अनलाइन साइट को लागी अधिक वेब ट्राफिक सुझाव दिन्छ।
त्यहाँ बिभिन्न विधिहरू हुन्छन् कसरी तपाइँसँग निश्चित रूपमा तपाइँको साइटमा वेबसाइट ट्राफिक लक्षित गर्न सक्ने क्षमता छ। ती मध्ये कुनै एक पोस्ट विज्ञापन हो, निश्चित तपाईंको वेब पृष्ठमा एचटीएमएल ट्याग को उचित स्थापना, र अरूको ब्लग साइटको बारेमा कुरा पछि। थप विवरणको लागि, तल पढ्न जारी राख्नुहोस्।
लेख्ने विज्ञापन यति धेरै प्रयास गरिएको छ साथै तपाईंको वेब साइटतर्फ लक्षित साइट आगन्तुकहरू प्राप्त गर्ने प्राविधिक परीक्षणहरूको। तपाईंको वेब पृष्ठ जति अधिक अन्तरदृष्टि छ, त्यत्ति धेरै साइट आगन्तुकहरू तपाईंले पक्कै पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
के हुन्छ यदि तपाईंसँग आफ्नै वेब सामग्री सिर्जना गर्न प्रोफेन्सिटी छैन?
सम्भावनाहरू यो हो कि तपाईंसँग तपाईंको साइट चलाउनका साथै एक अन्य कामका लागि डील गर्न पर्याप्त समय नहुन सक्छ र अनलाईन समस्याहरू पनि छन्।
सबै को, तपाइँको प्राथमिक मुद्दा तपाइँको वेब पृष्ठहरुमा तपाइँको दर्शकहरु उच्च गुणवत्ता को सामग्री को पेशकश गर्न को सक्षम हुनु हो। साथ साथै प्रबन्धनको महान सम्झौताको साथसाथै तपाईंको हातमा विज्ञापन कार्यहरू, तपाईं थप कामको सामना गर्न सक्नुहुन्न, यद्यपि तपाईंले वेब ट्राफिक प्राप्त गर्नमा आफ्नो दिमाग राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईं नेतृत्व लिनुहुन्छ, तपाईं एक अर्को व्यक्तिको करार गर्न सक्नुहुन्छ। अधिक तपाईंको विज्ञापन र मार्केटिंग परियोजना विज्ञापन गर्न समाधान। तपाइँ लगातार तपाइँको वेब साइट को लागी घोस्टराइटर्स रोजगार लिन सक्नुहुन्छ।
बिभिन्न अन्य ब्लगहरुमा छलफल गर्दै
अझ बढि वेबसाइट ट्राफिक प्राप्त गर्न अतिरिक्त रणनीतिले अन्य व्यक्तिको ब्लग साइटहरूको छलफल गरिरहेको छ। धेरै व्यक्ति आफ्नो प्रभावकारिता पहिचान गर्न को लागी काम गर्न रोक्छन्। रूचाइएको ब्लग साइट वेबसाइटहरुमा एक नजर हेरेर साथै तपाईलाई थाहा भएको विषयहरु मध्ये कुनैको बारेमा बौद्धिक कुरा छोडेर तपाईको ब्लग पोष्ट समीक्षामा पुग्न सक्ने सम्भाव्यता तपाईको वेब लिंक पछ्याउन र अझ बढी पत्ता लगाउन इच्छुक हुनेछन्। तपाइँको साथ साथै तपाइँ उनीहरूलाई चिन्तित गर्ने विशेष विषयको बारेमा के सिक्नुहुन्छ।
HTML वा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा अरूको लागि थोरै टेक्नोलोजिकल हुन सक्छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ कि तपाई सहि शीर्षक ट्यागहरू इनपुट गर्नुहुन्छ जसले गर्दा खोजी ईन्जिनहरूले तुरून्तै ती सूचनाहरू देखाउँछन् जुन तपाईको साइट वरिपरि छ। आवश्यक कीवर्ड वाक्यांशहरूको साथसाथै मेटामा अभिव्यक्तिहरू समावेश गर्दछ कुञ्जी शब्दहरू ट्यागहरू र मेटा सारांश।
जस्तो तपाईले अहिले पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईको इन्टरनेट साइटको वेब ट्राफिकलाई लक्षित गर्न यो सरल छ तपाईले गर्नका लागि चीजहरू चिन्नुहुन्छ। किन ढिला गर्नुहुन्छ जब तपाइँ हाल आफ्नो वेब पृष्ठ राख्न को लागी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
स्थितिहरू दिनको प्रत्येक मिनेट रूपान्तरणको साथ साथै तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिकमा निर्भर गर्दछ।
तलको खेलिरहेको सम्पूर्ण अवधारणा भनेको तपाईंले आफ्नो वेब साइट अवलोकन गर्न व्यक्तिहरूको लागि कोर्नको लागि प्राप्त गर्नुभयो। त्यहाँ कसरी तपाई निश्चित रूपमा तपाइँको साइट मा वेब ट्राफिक लक्षित गर्न सक्षम हुनेछ मा विभिन्न विधिहरू छन्। पोस्ट विज्ञापन र मार्केटिंग एक धेरै प्रयासको साथसाथै तपाईंको इन्टरनेट साइटतर्फ लक्षित साइट आगन्तुकहरू बनाउने दृष्टिकोणहरूको पनि मूल्यांकन गरिएको छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ कि तपाई सहि शीर्षक ट्यागहरू इनपुट गर्नुहुन्छ जसले गर्दा खोज इञ्जिनहरूले तत्काल जानकारी प्रस्तुत गर्दछ जुन तपाईको इन्टर्नेट साइटको वरिपरि के छ भरिन्छ।